Posted by ကလိုစေးထူး at 11:32 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေပါပဲ ကိုစေးထူးရေ..
ပညာလည်းရ၊ ဗဟုသုတလည်းတိုး၊ စာအရေးအသားကလည်း ညက်ပါပေ့ဗျာ....
မိုက်တယ်...အဲ့ဒီမှာ ဓာတ်ပုံ သွားရိုက်ချင်လိုက်တာ...
May 29, 2007, 2:59:00 AM
it is really nice view . thanks for share to readers .
May 29, 2007, 6:54:00 AM
လှတယ် ကိုစေထူးရေ ။ ကျမကတော့ သဲကန္တာရပိုင်းကဟာလေး ပိုကြိုက်တယ် ။ tropical က ဒီမှာ တွေ့ နေရတာဆိုတော့ ။ သစ်ခွပန်းကြည့်ချင်ရင် စင်္ကာပူလာခဲ့ပါ ။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုပန်းက သစ်ခွပဲ ။ နောက်မှ ရိုက်ထားတဲ့ သစ်ခွမျိုးစုံ တင်ပေးပါဦးမယ် ။
May 29, 2007, 8:40:00 AM
ကိုစေး ခှဉ်ပေါင်ရွက် မ ခူးခဲ့ဘူးလား
May 29, 2007, 1:32:00 PM
အကိုသံလွင် ငှက်ကပဲ သဘောကောင်းပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရတယ်လို့ ကြားဖူးပေါင်... :P